ဤမေးခွန်းကိုငါသည်လည်းဖို့တိုတောင်းတဲ့အဖြေပေး သည့်မေးမြန်းမှုစာမျက်နှာ ။
သငျသညျအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်နှင့်ခရစ်ယာန် Triune ဘုရားသခငျသညျတူညီသညျဘုရားသခငျသောဗီဒီယိုတစ်ခုတွင်ပြောကြားခဲ့သည်။ အစ္စလာမ်နှင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာနှစ်ဦးစလုံးဂျူးဘာသာတွင်အခြေစိုက်ကြသည်အပေါင်းတို့နှင့်ဂျူးပရောဖက်အများတို့သည်မွတ်စ်လင်ကိုရမ်ကျမ်းထဲမှာအခါဘယ်လိုဖြစ်နိုင်သလဲ
ကမျြးစာကိုဘုရားသခငျသညျအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ကိုခေါ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ သူ၏နာမ YHWH - ထာဝရဘုရားက။ ဤအမည်သည်သညျယရှေုဖြစ်ပါတယ်။
ရောမ 10:9။ သငျသညျယရှေုကိုကြောင်းသင်၏နှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံလျှင် သခင်ဘုရား နှင့်ဘုရားသခင်သည်သေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူကြောင်းစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်, သင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြစ်သည်။
မယ်ဆိုတာအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်နှင့် YHWH ဧကန်အမှန်ယရှေုကိုအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ကိုခေါ်လိုအတူတူပင်ဘုရားဖြစ်တော်မူ။
"အဲဒီမှာအဘယ်သူမျှမကအခြားဖြစ်ပါသည် ဘုရားသခငျသညျ ထက် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် နှင့်တမန်တော်မြတ်၏တမန်ဖြစ်၏ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် ။ "
အာရဗီက "ဘုရားသခင်" နှင့် "အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည်" ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအရှင်ဘုရားသခင်သည်မဆိုလိုကြောင်းထုတ်ဖေါ်သည့်ကွဲပြားခြားနားသောစကားလုံးများဖြစ်ပါသည်။ သူတို့ကအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ကိုသာဘုရားဖြစ်ပြီးသောသမ္မာကျမ်းစာဘုရားသခငျသညျမဟုတျကွောငျးထို့နောက်ဝန်ခံ။ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် "ဘုရားသခင်" အဖြစ်ဘာသာသောအခါမူကားခေတ်ပြိုင်ဆွီဒင်ဘာသာအတွက်ပုံပျက်နေသည်။ ဖြစ်ကောင်းခရစ်ယာန်ဘုရားသခင်၏အမှုကြောင့်အနောက်နိုင်ငံတွေမှာကျနော်တို့စဉ်းစားတွေးခေါ်သို့မရောထွေးပါလိမ့်မည်။ အကြောင်းမူကား,
သို့သော် "အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည်" ဆိုသည်မှာ "အကြီးမြတ်ဆုံးဘုရား" ဒါပေမယ့်အသုံးအနှုန်းဟာသမ္မာကျမ်းစာသညျဘုရားသခငျကိုဆိုလိုတာမှနားလည်မှုလွဲမဖြစ်သင့်တဲ့လျော်သောနာမည်ဖြစ်ပါတယ်။ မက္ကာ 300 သည်ရုပ်တုတို့ရှိခဲ့သည်။ ဤအရာ, အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည်တမန်တော်မြတ်၏အကြီးမြတ်ဆုံးဘုရားထွက်ကောက်ယူနှင့်ဘုရားသခင်တဆူတည်းဖို့ကဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
သမ်မာကမျြး 30: 4th အဘယ်သူသည်ကောင်းကင်သို့တက်ကြွပြီးထပ်မံဆင်းလာခဲ့သလဲ အဘယ်သူသည်မိမိလက်၌အလေတိုက်ကိုစုဝေးစေခဲ့သလဲ အဘယ်သူသည်ရေကိုအဝတ်ခညျြနှောငျခဲ့သလဲ အဘယ်သူသည်မြေကြီးသားအပေါင်းတို့ရဲ့ကန့်သတ်ထူထောင်ခဲ့သလဲ သူ၏နာမကိုအဘယ်သို့သောသူဖြစ်ပါနှင့်သားတော်ကားအဘယ်သို့ - သင်သင်တန်းကိုသိ?
1st: 11 at ဣသရလေကလေးတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်သောအခါငါ ချစ်. , အဲဂုတ္တုငါထဲကငါ၏သားကိုခေါ်။
2 ရှမွေလက 7: 14.Jag သူ၏အဘဖြစ်မည်, သူသည်ငါ၏သားဖြစ်ကြလိမ့်မည်။ သူပြုသောဒုစရိုက်ကိုကျူးလွန်လျှင်, ငါဒီတော့လူတွေကအများအားဖြင့်, ယောက်ျားများ၏သားသမီးများ၏ဒဏ်ချက်တွေနဲ့အကြောင်း, လှံတံနှငျ့အတူသူ့ကိုဆုံးမပါလိမ့်မယ်။
ဆာလံ 2:7အကြှနျုပျသညျထာဝရဘုရား၏ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကြွေးကြော်ပါလိမ့်မယ်။ သူငါ့အားပြောဆို၏: "သင်သည်ငါ့သားဖြစ်၏, ဤသည်နေ့ရက်ငါတစ်ပါးတည်းသောကိုယျတျောကိုရှိသည်။ "
မာကု 1:11 ။ ကောင်းကင်ကအသံတော်မှ လာ. : သင်သည်ငါနှစ်သက်တော်မူသောအရာ၌ငါချစ်ရာသခင်သည်သားတော်ဖြစ်ကြသည်။
မာကု 9:7ဤသူကားငါ၏ချစ်သားဖြစ်ပါသည်: နှင့်တစ်ဦးသည်မိုဃ်းတိမ်ထိုသူတို့ကိုလှမျးမိုးနှင့်မိုဃ်းတိမ်ကနေပြောခဲ့ကအသံလာသည်ဟုလာ၏။ ကိုယ်တော်နားထောင်ကြလော့
အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ကိုယ်တော်တိုင်သားကိုဖန်ဆင်းတော်မမူ, မကိုယ်တော်အနားမှာအခြားသောဘုရားသည်ရှိ၏, ကြောင်းအမှု၌အသီးအသီးဘုရားကိုသူဖန်တီးခဲ့သောအဘယ်အရာကိုနှုတ်ဆက်ပြီးကြလိမ့်မယ်, အချို့ဆက်ဆက်အခြားသူများကိုအုပ်စိုးရဖို့ရန်ကြိုးစားခဲ့ကြလိမ့်မယ်။ (ကုရ်အာန် 23:29)
ဧဇရသညျဘုရားသခငျ၏သားဖြစ်၏ "ထိုအခါယုဒလူတို့ပြောပါ" "များနှင့်ခရစ်ယာန်များကိုပြောပါ:" ခရစျတျောသညျဘုရားသခငျ၏သားတျောဖြစ်ပါတယ်။ "တစ်ဦးကသူတို့နှုတ်ဖြင့်ရှိပါတယ်ဟုသူတို့မရောက်မီမယုံသူတို့ထံမှsägelsernaတုပဖို့။ ဘုရားသခငျ၏တကျိန်စာသူတို့အမှန်တရားကိုပယ်နျလှညျ့ဖွားဘယ်လို, သူတို့အပေါ်မှာဖြစ်!" (ကုရ်အာန် 9:30)
ယောဟန် 3:16 ။ ဘုရားသခင်အဘို့ဤမျှလောက်ကိုယ်တော်၌အကြင်သူသည်ယုံထာဝရအသက်ကိုပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ရပေမယ့်တိုမနေသင့်ကြောင်း, မိမိသာဖြစ်ဘွားစေသားတော်ကိုပေးသောကမ္ဘာကြီးကိုချစ်တော်မူ၏။
2 ကော 5:19 ။ ဘုရားသခင်အဘို့ကိုယ်ကိုကိုယ်မှကမ္ဘာကြီးကိုပွနျလညျသငျ့မွခရစျတျော၌ရှိ၏, သူတို့ကသူတို့အပြစ်များကိုရေတွက်မရခဲ့သလဲ, သူကကျွန်တော်တို့ကိုပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး၏အမိန့်တော်ကိုကျူးလွန်ခဲ့သည်။
ထာဝရဘုရားသညျ - - ရန်ကျမ်းမပွနျလညျသငျ့စရာရှိသောကြောင့် YHWH ၏ရှိပါတယ်အဖြစ်ထို့ကြောင့်, အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အတွက်မကယ်တင်ရှိသေး၏။
ထို့အပြင်ကုရ်အာန်ကမျြးစာကိုဖော်ပြထားတယ်နှင့်သက်သေခံအဘယ်အရာထက်ယေရှုတပါး။ ဤရွေ့ကားလုံးဝနှစ်ဦးကိုကွဲပြားခြားနားသောလူမျိုးဖြစ်ကြ၏။ ရန်ကျမ်း၏ "ယေရှု" လို့ကျမ်းစာယေရှုအကြောင်းအဘယ်သို့မိန့်ဆန့်ကျင်လုံးဝတတ်၏။